Mahajanga : Vita ny lalana ao an-tampon-tanàna -
AccueilRaharaham-pirenenaMahajanga : Vita ny lalana ao an-tampon-tanàna
Fotodrafitrasa maro sosona no notokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly tolakandro tao Mahajanga tany amin’ny faritry Boeny nentina nanasoavana sy hanalana fahasahiranana ny vahoaka. Lalana mirefy 3 km sy 700 metatra no notokanana tao an-tampon-tanàna tany an-toerana, nisedra olana goavana ireo vahoaka tao Mahajanga noho ny faharatsian-dalana, hanamaivana ny fahasahiranam-bahoaka no tanjon’ny fitondram-panjakana. Ity fotodrafitrasa ity moa izay fanamby nampanantenain’ny Filoham-pirenena an’ireo vahoakan’i Mahajanga ary izao tontosa soa aman-tsara izao. Rehefa zarazaraina io lalana vita dia mirefy 800 metatra ny tao Ambalavola, mirefy 450 metatra kosa ny tao Tsararano ambany , ary 747 metatra ny teny Ambondrona izay mihazo ny Oniversite, ity farany izay anisan’ny nampimenomenona indrindra ny mponina teny an-toerana noho ny faharatsian’ny lalana ka nahasarotra ny fifamezivezena. Efa vita tanteraka ihany koa ny lalam-pirenena fahefatra mampitohy an’i Mahajanga sy Antananarivo, ireo fotodrafitrasa izay hampiroborobo ny fampandrosoana any an-toerana. “Ho fitaratr’i Madagasikara ny tanànan’i Mahajanga” raha ny nambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lahateniny. Mitohy hatrany ihany koa ny fanohizana ny asa ho an’i tanànan’i Mahajanga fa tsy mijanona hatreo mba hirosoana ho amin’ny tena fampandrosoana raha ny nohantitraterin’ny Filoham-pirenena hatrany.
“Tsy mijanona hatreo ny asa”…
Mbola maro ireo tetikasa ho entina ho an’ny faritra, mihaino akaiky ny fasahiranam-bahoaka ny filoham-pirenena ary mikatsaka vahaolana hatrany hamahana ny olana sedrain’ny vahoaka. Tsy nisy niraraha sy nihaino ny hetahetan’ny vahoaka nandritra ny 50 taona, tonga namaly ny antso nataon’ireo mponin’i Mahajanga kosa ny Filoham-pirenena. Ankoatra ireo dia nahazo fitaovana maro vaovao ihany koa ny tao amin’ny Hopitaly Androva, nahitana fandriana 6, fitaovana raitra toa ny seza sy latabatra sy ny sisa ho an’ny birao, kidoro miisa 10, biraon’ny mpitsabo miisa 2, latabatra fitoeran’ny solosaina miisa 2, seza miisa 6 ary fiara vaovao mpitondra marary 1 avy amin’ny fitondram-panjakana kanadiana vokatry ny fiaraha-miasan’ny fitondrana malagasy amin’izy ireo. Sarobidy eo amin’ny fampandrosoana ny firenena ny fahasalamam-bahoaka hoy ny Filoha Rajaonarimampianina ka tsy maintsy hatao laharam-pahamehana. Olona roa hetsy no mahazo tombony mivantana amin’ireo fotodrafitrasa naorina tao amin’ny renivohi-paritanin’i Mahajanga, ireo vahoaka tany an-toerana moa izay naneho ny hafaliany manoloana ny fanomezana nentin’ny fitondram-panjakana. Tontosa omaly ihany koa moa ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny fanjonoana Makamba an-dranomasina teto Madagasikara sy ny fanokafana ny taom-panjonoana izay notarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon’ny governemanta.